इनरुवाको न्यायीक समिति अत्यन्तै प्रभावकारीः न्यायिक समिति सदस्य रञ्जेश भट्टराई - inaruwaonline.com
इनरुवाको न्यायीक समिति अत्यन्तै प्रभावकारीः न्यायिक समिति सदस्य रञ्जेश भट्टराई
- प्रमोद कुमार यादव
प्रकाशित मिति: सोमबार, बैशाख १६, २०७६ समय: १६:३६:३०
इनरुवा नगरपालिका २ का वडा सदस्य तथा न्यायिक समिति इनरुवाका सदस्य रञ्जेश भट्टराईको जन्म वि. सं. २०२९ साल सुनसरीको साविक सत्तेरझोरा गाउँ विकास समितिमा भएको हो । पिता रेवत प्रसाद भटट्राई र माता उमा देवी भटट्राईकी ५ छोरी र दुई छोरा मध्ये माईलो छोरा रञ्जेश भटट्राई हुन् । रंञ्जेशले २०३३ सालमा आफ्नो प्रारम्भिक शिक्षा सदरमुकाम इनरुवा १ स्थित रहेको सुनसरी प्रा.वि.बाट सूरु गरेका थिए । त्यत्तिबेला अहिलेको जस्तो प्राविधिक युग थिएन ।
बाल्यकाल रमाईलोसँग बिताएका रञ्जेशको साथी भाईसँग पौडी खेल्ने, गित गाउने सोख थियो । असल साथीहरुसँग संगत थियो । उनि सामाजिक कार्यमा सरिक हुन बाल्यकालमै प्रेरित थिए । २०३६ सालमा भर्ना भएका रञ्जेशले २०४२ सालमा इनरुवाको भगवती माध्यमिक विद्यालयबाट एस.एल.सी परिक्षा उर्तिण गरेका हुन् । यस अवधिमा रञ्जेशले विद्यार्थीहरुको हक अधिकारका लागि सधै सकृय भए हिडेका थिए ।
त्यसबेला भगवती माध्यमिक विद्यालयमा हेड सर गोकुल श्रेष्ठ थियो । हेड सरको कडा स्वभाव थियो । माधव आचार्य सरले पंचायत तथा नागरीक विषय पढाउनुहुन्थ्यो । मुलुकमा पंचायती व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्ने उदेश्यले उत्तर पूस्तिका पठाईन्थ्यो । रञ्जेशले माधव सरको हातबाट उत्तर पुस्तिका खोसेर कक्षामै च्याती दिदाँ हेड सरबाट निकै कुटाई खाएको त्यो घटना सम्झेर आज पनि उनलाई रमाईलो लाग्छ । सुनसरी बहुमुखी कलेजबाट स्नातक तह सम्म अध्ययन गरेका रञ्जेशले २०४५ सालमा नेपाल विद्यार्थी संघमा आवद्ध भएर सचिव पदमा रहेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेका थिए । २०४६ साल देखी नेपाली काँग्रेससँग भएर राजनिति सूरु गरेका रञ्जेशले नेपाली विद्यार्थी संघ क्याम्पस ईकाई सचिव, ने.वि.सं वडाध्यक्ष, क्षेत्रिय सचिव, दरुण दल नगर सचिव, अधिवेशनबाट तरुण दल नगर अध्यक्ष निर्वाचित, नेपाली काँग्रेस इनरुवा नगर सचिव र हाल नेपाली काँग्रेस जिल्ला कार्य समिति सुनसरीको सदस्य र २०७४ साल स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसकै उम्मेदवार बनि इनरुवा नगरपालिका २ नं. वडा सदस्य निर्वाचित तथा न्यायिक समितिको सदस्य पदमा रही जिम्मेवारी पूर्णले काम गरी रहेका छन् ।
सानो उमेरमा धेरै कमले समाज सेवामा काम गरेका हुन्छन् । त्यसै मध्ये सानै उमेर देखि समाज सेवामा अगाडी बढेका इनरुवा नगरपालिका २ का वडा सदस्य तथा न्यायिक समिति इनरुवाका सदस्य रञ्जेश भटट्राईसँग इनरुवा अनलाईनले इनरुवा नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरी रहेको काम कार्वाहीको बारेमा गरिएको संक्षिप्त अन्तरवार्ता प्रस्तुत छः
१. तपाईं वडा सदस्यमा निर्वाचित भई सकेपछी कस्तो महसुस भएको छ ?
सबैभन्दा पहिला इनरुवा नगरपालिका वडा नम्बर २ को वडा सदस्यको हैसियतले वडाबासीलाई धन्यबाद दिन चाहन्छु जसले मलाई योग्य ठानेर बिजयी गराउनुभयो । अब मेरो अनुभब भन्नु पर्दा म पहिलो पटक चुनाबमा आएको हुँ र पहिलो पटकमै चुनाब पनि जिते । चुनाब भन्दा पहिला सिंहदरबारको अधिकार वडा कार्यालयमा हुन्छ भन्ने सोच राखेको थिएँ तर त्यस्तो भएको छैन । एउटा सानो कामको लागि समेत नगरपालिकालाई गुहार्न परेको अवस्था रहेको छ । यस्तो हुनु भनेको नगरपालिकाको दोष होइन यो चाहिँ राज्यको नै गल्ती हो । अब स्थानीय चुनाब हुनु पूर्ब जनताहरुलाई सबै काम वडा स्तरमै हुन्छ भन्ने थियो तर अहिले सम्म त्यस्तो अधिकार हामीलाई प्राप्त भएको छैन, एउटा कलम समेत किन्न नागरपालिकको सिफारिश लिनु पर्ने अवस्था छ । अब बिस्तारै होला सबै काम गर्ने अधिकार वडालाई पनि ।
२. तपाईंलाई जनताको साथ कत्तिको मिलेको छ ?
म राजनीतिमा आउनु भन्दा अघि एउटा समाज सेवी पनि हो । इनरुवाका धेरै ब्यक्तिहरुसंग मेरो राम्रो सम्बन्ध पनि छ । राजनीति मेरो पेशा होइन, यो चाहिँ मेरो जनताप्रतिको सेवा हो । मैले चुनाब अघि नै एउटा बाचा जनतासंग गरिसकेको छु कि मैले कुनै तलब भत्ता नलिने भनेर । मलाई जिताएर यहाँसम्म पुर्याउने मेरा वडाबासीले तपाईंलाई साथ हामी दिन्छौं, तपाईं राम्रो काम गर्नुस् भनेर भन्दै आइरहनुभएको छ र म त्यही अनुसार गर्नेछु ।
३. स्थानीय तहको न्यायिक समितिको काम र अधिकार क्षेत्र के–के हो ?
प्रथम त स्थानीय सरकारको रुपमा स्थानीय तहलाई खडा गर्दै गर्दा सरकारका प्रमुख तिन अंग मध्ये न्यायलयको रुपमा न्यायीक समिति गठन गरिएको हो । यस समितिले स्थानीय तहमा भएका हरेक मुद्धा मामिला मेलमिलाप गराउने र केही मुद्धा फैसला नै गरी किनारा लगाउने काम गर्दछ ।
४. न्यायिक समितिमा उजुरी आउने क्रम निकै सुस्त छ । यस्तो किन भयो ?
स्थानीय स्तरमा स्थानीय तहमा आफैमा स्थानीय सरकार भएको र सरकारको कार्यपालिका व्ययस्थापिका र न्यायपालिका स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध भएको स्थानीय जनतालाई बुझाउन न सक्नु र नबुझाउनुले गर्दा नै होला । बिस्तारै उजुरी आउने क्रम बढ्दो छ ।
५. इनरुवा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा हालसम्म कति वटा र कस्ता–कस्ता किसिमका उजुरी दर्ता भएको छ ?
किटानी साथ यत्ति नै त भन्न सक्दिन तर मुद्धाको चाप एकदमै बढेर गएको छ । अधिकाँश मुद्धा चै सानो चामल, अंश, जग्गा किचोला, महिला हिंसा, सम्बन्ध बिच्छेद, कुटपिट, ठगी, वातावरण प्रदुशण लगायतका मुद्धा धेरै छन् ।
६. इनरुवाको न्यायिक समितिमा परेको उजुरी मध्ये कति समाधान भए र नभए के कारणले हुन सकेन केही भन्नुहुन्छ कि ?
अधिकाँश मुद्धा किनारा लागेका छन् । केही मुद्धा तारेखमा छन् । यस न्यायिक समितिको हरेक मुद्धा प्रथम त मेलमिलापको माध्यमबाट किनारा लगाउने उदेश्य भएकाले पक्ष बिपक्षलाई तारेखमा राखी एकै स्थानमा हाजीर गराई मेलमिलाप हुन नसके कानु बमोजिम मुद्धा फैसला गरी किनारा लगाईन्छ ।
७. इनरुवा नगरपालिकामा गठित न्यायिक समितिको काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न सकेको छैन भनि व्यापक गुनासो नि ? के हो ?
मलाई त तेस्तो लाग्दैन । सुनसरीका सबै स्थानीय तह मध्ये इनरुवाको न्यायीक समिति अत्यन्तै प्रभावकारी रुपमा आफ्नो कार्य गर्दै आएको छ । हामी संयोजक सहित दुवै सदस्य अत्यन्तै महत्वपूर्ण कार्य समिति छोडी न्यायीक समितिमा समय दिएर अहोरात्र कार्य गर्दै आएका छौं ।
८.स्थानीय तहको न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादनको कामबारे नागरिकदेखि जनप्रतिनिधि समेत अनभिज्ञता प्रकट गर्छन । यो के कारण भएको हो ?
तेस्तो भएको छैन् । नागरीकहरुमा न्यायीक समितिको बारेमा केही हद सम्म जानकारी नपुगेको हुन सक्छ । तर सवै जनप्रतिनिधीहरु न्यायिक समितिलाई सवल र सक्षम बनाउन प्रयत्न गर्नुहुन्छ । नगर प्रमुख आफै न्यायीक समितिलाई कसरी सवल बनाउने भन्नेमा चिन्तीत हुनुहुन्छ ।
९. स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय रुपमा काम गर्न सकेको छैन किन ?
केही हद सम्म आफैमा कानुन प्रष्ट छैन् । अधिकार क्षेत्र कस्को भन्नेमा कानुन बाँझीन्छ । त्यसले गर्दा केही समस्या भने छन् । विस्तारै सुधार हुदैछ ।
१०. तपाई न्यायिक समिति इनरुवाको सदस्य हुनुहुन्छ । यहाँका कतिपय नागरिक न्यायिक समितिको काम बारे बेखबर छन् ? यसो किन भएको होला । तपाईलाई के लाग्छ ?
मैले अघी नै भनी सके प्रत्येक नागरीक आफ्नो स्थानीय सरकारको न्यायीक अंग न्यायीक समिति स्थानीय तहमा उलब्ध छ भन्ने जानकारी पूर्याउन नसक्नु र स्वम नगरबासी जागरुक नहुनmु नै प्रमुख कारण हो । उप्रान्त अव यो समस्या प्रत्येक वडामा कार्यक्रम गरी जानकारी गराउने उदेश्य न्यायीक समितिको रहेको छ ।
८. अन्त्यमा इनरुवा नगरवासी र वडाबासीलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
नगरवासीमा मेरो अनुरोध छ । विकास निर्माणका कार्यमा नगरपालिकासँग हातेमालौ गरौ । आफ्नो कर्तव्यबाट कोही न पन्छीयौ । हाम्रो नगर बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको उत्तिकै दायित्व हो । हामी जनप्रतिनिधीका कारण नगरवासी हैन, नगरवासीका कारण हामी जनप्रतिनिधी भएका हौं । हाम्रो मार्ग निर्देशन नगरबासीले हमेशा गर्नुपर्छ । स्थानीय सकार नगरबासीको सेवागर्न प्रतिवद्ध छ । स्थानीय तहममा भएको न्यायीक समितिलाई नगरवासीको सल्लाह सुझावको खाँचो छ । समाजका हरेक समस्यालाई समाधन गर्न न्यायीक समिति कहिले पछी नपर्ने प्रतिवद्धता नगरवासीलाई भन्न चाहन्छू । तपाईंहरुका सबै समस्या हामी समाधान गरिरहेका छौं । सबै पूरा गर्ने छौं । समस्या लिएर आउनुहोस कार्यालयमा हामी सधैं तपाईंहरुको सेवामा हाजिर हुन्छौ । तपाईंहरुको मुख्य समस्या चाँडै समाधान गर्नेछौं । अन्त्यमा भयरहित हिंसामुक्त समाज निर्माणमा सहयोग गर्न नगरवासीलाई दुवै हात जोडेर अनुरोध गर्दछु ।